Kusho ukuthini uma engibuka angimamatheke? - Amathiphu amadoda | Amadoda aSitayela
Akukhona okokuqala ukuthi uhlangane naleyo ntombazane nakulezo zikhathi uyakubuka amamatheke nawe. Kungaba umzuzu owuthandayo noma mhlawumbe awujabuli kakhulu ngaleso senzo. Okuyiqiniso ukuthi uzwela futhi ifuna ukuxhumana okuthile.
Akudingekile ukuzibamba ngesenzo, kepha ukuze ube sezingeni eliphakeme lomnumzane futhi bheka emuva ngesenzo esilula njengokubingelela okuncane. Kungaba nesibindi esikhulu uma usondela futhi uyazethula, kodwa lokho uma ungumfana onesibindi ngempela. Noma kunjalo, akukaze kube buhlungu ukusebenzisa umusa.
1 Uma kungazelelwe leyo ntombazane ikubuka
2 Uyakubuka, amamatheke futhi athinte izinwele zakhe
3 Thola ukuthi ukubukeka kungakutshela ini
4 Uma ekubuka futhi amamatheke ngawe
Uma kungazelelwe leyo ntombazane ikubuka
Uqaphele intombazane futhi kuqondana nokuthi isendaweni ebonakalayo. Ukubukeka kwakho kungahle kuqondane futhi ngokumangala nguye obuka wena. Akukhona nje ukubukeka kodwa futhi ukumamatheka nawe. Umangele futhi mhlawumbe awukwazi ukwazi ukuthi kufanele usabele kanjani.
Ngemuva kwaloko kubukeka nalokhu kumamatheka kuza nezinye izinhlobo zokuthinta. Uma ekubuka futhi ibheka kude izikhathi eziningana uma uyibuka, khona-ke kungenxa yokuthi ukuthanda kakhulu. Ngalesi sikhathi, uma unentshisekelo kufanele usondele futhi uzethule, Kufanele uthole ukuthi uyathanda yini ukuhlanganyela futhi unelukuluku lokwazi ngawe.
Uyakubuka, amamatheke futhi athinte izinwele zakhe
Kusho ukuthini uma leyo ntombazane uyakubuka, uyamamatheka futhi uthinta izinwele zakhe? Uyakhuphula ukushukuma komzimba kwakhe, ukumoyizele futhi uselidlulisile ilukuluku lakhe ngawe. Futhi, owesifazane lapho ekhangwe kakhulu uthanda ukuthinta izinwele zakhe, lokho kusho ukuthi uyakuthanda futhi inemizwa ngawe.
Uma futhi ihlale imomotheka futhi ikhanya, kunezimpawu eziningi kakhulu ezikukhuthaza ungafika uzokhuluma naye. Ngaphandle kokungabaza, wenza lula leso sikhathi kakhulu futhi akayeki ukunikeza izimpawu ezicacile zokuthi uyakuthanda.
Ngesikhathi esinjengalesi kufanele usebenzise ithuba Uma intombazane ekubukayo ikumoyizela, singakwazi yini ukukhuluma ngokuheha? Uma kunjalo, manje umfana kufanele athathe izintambo, sondela, khuluma futhi wenze lowo wesifazane abone ukuthi nawe unentshisekelo.
Thola ukuthi ukubukeka kungakutshela ini
Bheka yonke imininingwane eyenzeka kulokho kubukeka. Ukuze wazi ukuthi kufanele usabele kanjani ekubukeni kufanele ukuxazulula ezinye nezimfumbe kancane. Uma leyo ntombazane inamahloni mhlawumbe ukubukeka kwakho nenhloso yakho kudidekile.
Ubambe amehlo akhe, kepha umzuzwana ofuna ukumbheka ngawo susa ubuso bakho. Leyo ntombazane iyanikela izimpawu zamahloni, ngoba kunabantu abakha leyo ncazelo encane yokukhathazeka ngokungamukelwa. Ngokuqinisekile Ngikubonile ngoba bengifuna ukwazi nokuncoma wena, kepha uyakugwema lokho kubukeka ngoba akalokothi athathe leso sinyathelo.
Uma, ngakolunye uhlangothi, ehlala ekhanga futhi ungakugweme ukubuka kwakho yingoba uyintombazane uqiniseke ngezinhloso zakho ngakho-ke ufuna ukugcina leyo ntshisekelo. Uma, ngokungeziwe, kuzo zombili lezi zimo intombazane imomotheka, ungangabazi ukuthi empeleni kuyinjongo yakhe. Mhlawumbe funa okungaphezu kokuthintana kwamehlo. Lapho owesifazane emoyizela umfana, ubeka ingxenye yezinhloso zakhe zokwenza okuthile okuhle kwenzeke.
Uma ingxoxo ibanjwa ngokuqinisekile iyoba khona ukuwela okuqhubekayo kokubuka. Bheka ukuthi ingxoxo yakho iqhubeka kanjani nokuthi intombazane imomotheka kakhulu. Futhi, qaphela uma engalahlekelwa yimininingwane kulokhu omtshela kona, uma ekubuka futhi uma ehlose ukukuthinta, ngoba akukho kungabaza ukuthi uyakuthanda.
Uma ekubuka futhi amamatheke ngawe
Omunye umzuzu ongaba nentshisekelo kulapho uneqembu labangane noma ojwayelene nabo. Owesifazane omazi kancane ubheka wena futhi akunakugwenywa ukuthi phakathi kwenu nonke nigcwalise ingxoxo ngokuhleka, kepha kuphela lokho kumamatheka nokubukeka kunikezelwe kuwe. Noma ngabe isihloko asihlekisi, qhubeka ukwabelana nawe kubukeka nokumamatheka. Nakanjani udlala ngothando ngawe noma udinga ukusondela kuwe ngoba uyakuthanda.
Uma ufuna ukwazi imikhondo eminingi ungayibheka noma nini ifuna ukungena endaweni yakho yangasese. Uyasondela, ufuna ukuthi usondele futhi aqale ingxoxo nawe angafuni ukuqeda, abuye adlalise futhi amoyizele. Uke waqaphela ukuthi naye ubheka njalo ezindebeni zakho? Impela kuwuphawu lokuthi ufuna ukuqabula, umlomo wakho uzobonakala sengathi uyinkanuko kakhulu.
Kodwa-ke, impela usufinyelele lesi sixhumanisi ngoba kukhona umuntu ongaqondakali ongathanda ukwabelana naye ngothando lwakho. Uma zonke lezi zimpawu zivela ndawana thile, noma zenzeka kaningi kuwe noma ngabe ukuphi inhloso yakho, kufanele ngokungangabazeki usebenzise leli thuba. Uma ufuna ukuqhubeka nokufunda okuningi, ungafunda ukuthi yini «lapho owesifazane ekugqolozele ».
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Kufanelekile » Izithandani Nezocansi » Kusho ukuthini uma engibuka angimamatheke?